BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro waxay helayaan beta ee Android Pie | Androidsis
Eder Ferreno | | Bq, Noocyada Android
Bishii Maajo ee la soo dhaafay, BQ waxay si rasmi ah u soo bandhigtay labadeeda taleefan ee cusub Android One oo ah nidaamka hawlgalka. Moodooyinkaan waa Aquaris X2 iyo X2 Pro. Xaqiiqda ah inay haysteen nuqulkan nidaamka qalliinka, waxay iyaga siisay albaabka si ay u helaan cusboonaysiinta si ka dhakhso badan moodooyinka kale ee sumadda, sidaan horeyba kuugu sheegnay soo bandhigideeda.
Oo kanu waa wax mar hore rumowday, maxaa yeelay Beta ee Android Pie ayaa durba loo bilaabay BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro. Shirkadda lafteeda ayaa hore si rasmi ah ugu dhawaaqday. Isticmaalayaasha ayaa durba taleefanadooda ku siinaya beta.
Habkan, adeegsadayaasha wata mid kasta oo ka mid ah taleefannadan waxay awoodi doonaan inay tijaabiyaan dhammaan wararka nooca cusub ee nidaamka qalliinka kahor imaanshihiisa rasmiga ah ee dhammaan aaladda. Sida caadiga ah barnaamijka beta, waxaa jiri kara cillado ama dhibaatooyin xagga hawlgalka ah.
BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro waxay leeyihiin laba sano oo cusbooneysiin dammaanad leh, sida dhammaan taleefannada Android One sida caadiga ah leeyihiin. Waxaa intaa dheer in la hayo wadar ahaan saddex sano oo ah cusboonaysiinta amniga. Hadda, cusboonaysiinta ugu horreysa ee ugu weyn ee taleefannadan sumadda ah ayaa soo socota, in aysan ahayn inta badan Isbaanish.
Waxaa jira durba isticmaaleyaal leh BQ Aquaris X2 ama X2 Pro kuwaas oo marin u leh beta. Markaa waxaad bilaabi kartaa inaad tijaabiso dhammaan wararka sheegaya in noocaan cusub ee Android kaaga tago taleefankaaga. Ku saabsan taariikhda nuqulka ugu dambeeya Waa la daahfurayaa, wax hadda la sheegay ma jirto.
Waxaad awoodi kartaa in moodooyinkan cusub ay caawiyaan Android Pie si ay u koraan xoogaa, sababtoo ah nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka wali kuma jiro xogta qaybinta ee ugu dambeysay. War xun oo walaac ku keena Google. Hadda, adeegsadayaasha leh BQ Aquaris X2 iyo X2 Pro waxay durba ku raaxaysan karaan beta -kan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Qalabka 'Pie beta' wuxuu yimaadaa BQ Aquaris X2 Pro iyo Aquaris X2
Kani waa dib-u-habeynta kacaanka ee Instagram oo dhowaan iman doonta